ग्लोरिया Fuertes: कविता | समाचार साहित्य
एनकर्नी आर्कोया | 30/12/2021 09:12 | अद्यावधिक गरियो 30/12/2021 09:14 | कविता
ग्लोरिया फुएर्टेस फोटो स्रोत: कविताहरू - फेसबुक ग्लोरिया फुएर्टेस
यसमा कुनै शङ्का छैन कि ग्लोरिया फ्युर्टेस संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध लेखकहरू मध्ये एक हो। उहाँका कविताहरू प्रायः सधैं सम्झिन्छन् किनभने हामी तिनीहरूसँग हुर्केका छौं। तर सत्य यो हो कि उनी बालकविता भन्दा बढी थिइन् । दुवै बलियो ग्लोरिया आकृति र उनको कविता समय संग सहन।
तर, ग्लोरिया Fuertes को थियो? तपाईंले लेख्नुभएका कविताहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्? त्यो कस्तो रह्यो?
1 को हुन् ग्लोरिया फ्युर्टेस
2 ग्लोरिया Fuertes को सबै भन्दा राम्रो कविता
2.1 जब तिनीहरूले तपाईंलाई नाम दिन्छन्
2.2 कस्तो बकवास देख्नुहुन्छ
2.4 कुकुर उठ
2.5 मेरो बगैचामा
2.6 अनुमान गर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् ...
2.8 तिमी कहाँ जाँदैछौ, सिकर्मी? (CAROL)
2.11 सानो ऊँट
2.12 मेरो गोलो अनुहारमा
2.13 बिचरा गधा !
को हुन् ग्लोरिया फ्युर्टेस
क्यामिलो जोसे सेलाको शब्दमा, ग्लोरिया फ्युर्टेस एक 'कुतिया परी' थियो (मलाईं माफ गर्नुहोस्)। उनीसँग सजिलो जीवन थिएन, र तैपनि, उनले बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा सुन्दर कविताहरू लेख्न सफल भइन्।
ग्लोरिया Fuertes 1917 मा म्याड्रिड मा जन्म भएको थियो। उनी Lavapiés छिमेकमा, एक विनम्र परिवार (आमा सिमस्ट्रेस र बुबा द्वारपाल) को काखमा हुर्किन्। उनको बाल्यकाल विभिन्न विद्यालयहरूमा बित्यो, जसमध्ये केही उनले आफ्ना कविताहरूमा उल्लेख गरेका छन्।
१४ वर्षको उमेरमा, उनकी आमाले उनलाई महिलाका लागि व्यावसायिक शिक्षा संस्थानमा भर्ना गरिन्, जहाँ उनले दुईवटा डिप्लोमा प्राप्त गरे: शर्टह्यान्ड र टाइपिङ; र स्वच्छता र बाल हेरचाह को। काममा जानुको सट्टा, उनले व्याकरण र साहित्यमा भर्ना गर्ने निर्णय गरे।
आफ्नो लक्ष्य, र उनी सधैं के बन्न चाहन्थिन्, उनी एक लेखक थिइन्। र उनी 1932 मा 14 वर्षको उमेरमा सफल भए, जब उनीहरूले उनको पहिलो कविता "बालपन, युवा, बुढ्यौली ..." प्रकाशित गरे।
उनको पहिलो काम कारखानामा लेखापालको रूपमा थियो, जसले उनलाई कविता लेख्न समय दियो। यो 1935 मा थियो कि उहाँले तिनीहरूको संग्रह प्रकाशित गर्नुभयो, बेवास्ता गरिएको टापु, र रेडियो म्याड्रिडमा कविता वाचन दिन थाले। तर, उनले जागिर छाडेनन् । 1938 देखि 1958 सम्म उनले सेक्रेटरीको रूपमा काम गरिन् जबसम्म उनले छोड्न सकेनन्। र यो छ कि त्यो जागिरको अतिरिक्त उनीसँग बच्चाहरूको पत्रिकामा सम्पादकको रूपमा अर्को पनि थियो। त्यो विधा त्यो थियो जसले प्रसिद्धिको ढोका खोल्न सफल भयो, जुन उनलाई 1970 मा आएको थियो। स्पेनिस टेलिभिजनले उनको बालबालिका र युवा कार्यक्रमहरूमा चित्रण गर्यो र उनको कविता विश्वभर चिनियो।
अन्तमा, र किनभने यो कविताहरू मध्ये एक हो जहाँ उनी आफैंले आफ्नो जीवनको बारेमा कुरा गर्छिन्, हामी तपाईंलाई उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका छोड्छौं।
ग्लोरिया Fuertes म्याड्रिड मा जन्म भएको थियो
दुई दिनको उमेरमा,
खैर, मेरी आमाको सुत्केरी धेरै मेहनती थियो
कि यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने यो मेरो लागि बाँच्न मर्छ।
तीन वर्षको उमेरमा उसलाई पढ्न थालेको थियो
मलाई मेरो काम छ बजे पहिले नै थाहा थियो।
म राम्रो र पातलो थिएँ
उच्च र केही हदसम्म बिरामी।
नौ वर्षको उमेरमा मलाई कारले समातेको थियो
पहिले नै चौध मा युद्धले मलाई समात्यो;
पन्ध्र वर्षको उमेरमा मेरी आमाको मृत्यु भयो, मलाई उहाँको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता पर्दा उहाँले छोड्नुभयो।
मैले पसलहरूमा ह्यागल गर्न सिकें
र गाजरको लागि शहरहरूमा जान।
त्यतिबेलासम्म मैले माया सुरु गरेँ,
- म नाम बोल्दिन -
त्यसको लागि धन्यवाद, म सामना गर्न सक्षम भएँ
मेरो छिमेकी युवा।
म युद्धमा जान चाहन्थे, यसलाई रोक्न,
तर तिनीहरूले मलाई बीचमा रोके
त्यसपछि मेरो लागि अफिस आयो,
जहाँ म मूर्ख जस्तै काम गर्छु,
"तर भगवान र घण्टीलाई थाहा छ म होइन।"
र म धेरै मैदानमा जान्छु।
मेरा सबै मरे वर्षौं भइसक्यो
र म आफैं भन्दा धेरै एक्लो छु।
मैले सबै क्यालेन्डरहरूमा पदहरू पोस्ट गरेको छु,
म बाल पत्रिकामा लेख्छु,
र म किस्तामा प्राकृतिक फूल किन्न चाहन्छु
जस्तो कि तिनीहरूले कहिलेकाहीं पेमन दिन्छन्।
ग्लोरिया Fuertes को सबै भन्दा राम्रो कविता
स्रोत: फेसबुक ग्लोरिया Fuertes
तल हामीले कम्पाइल गरेका छौं ग्लोरिया फ्युर्टेसका केही कविताहरू ताकि, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई थाहा छैन भने, तपाइँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँले कसरी लेख्नुभयो। र, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा तिनीहरूलाई पुन: पढ्न चाहनुहुन्छ किनभने तिनीहरू कवितामा उत्कृष्ट मध्ये एक हुन्।
जब तिनीहरूले तपाईंलाई नाम दिन्छन्
जब तिनीहरूले तिम्रो नाम,
तिनीहरूले मबाट तपाईंको नामको अलिकति चोर्छन्।
झूट जस्तो लाग्छ,
आधा दर्जन अक्षरले यति धेरै भन्छ।
तिम्रै नामले पर्खाल मेटाउने मेरो पागलपन हुनेछ,
म सबै भित्ताहरू रंगाउन जान्छु,
त्यहाँ इनार हुनेछैन
मलाई देखाउन बिना
तिम्रो नाम भन्न,
न त ढुङ्गाको पहाड
जहाँ म चिच्याउँदिन
तपाईंको छवटा फरक अक्षरहरू।
मेरो पागलपन हुनेछ,
चराहरूलाई गाउन सिकाउनुहोस्,
माछालाई पिउन सिकाउ,
पुरुषहरूलाई सिकाउनुहोस् कि त्यहाँ केहि छैन
पागल भएर आफ्नो नाम दोहोर्याउनु जस्तै।
मेरो पागलपन सबै कुरा बिर्सनु हुनेछ,
बाँकी 22 अक्षरहरूको, संख्याहरूको,
पढेका पुस्तकहरूको, सिर्जना गरिएका पदहरूको। तिम्रो नाम सहित नमस्कार।
आफ्नो नाम लेखिएको रोटी माग्नुहोस्।
- उहाँ सधैं एउटै कुरा भन्नुहुन्छ - तिनीहरूले मेरो पाइलामा भन्नेछन्, र म, धेरै गर्व, धेरै खुसी, धेरै हर्षित।
अनि म तिम्रो नाम मुखमा लिएर अर्को दुनियाँमा जानेछु,
सबै प्रश्नहरूको जवाफ म तिम्रो नाम दिनेछु
- न्यायकर्ता र सन्तहरूले केहि बुझ्दैनन् -
भगवानले मलाई यो सदाको लागि ननस्टप भन्नको लागि निन्दा गर्नुहुनेछ।
कस्तो बकवास देख्नुहुन्छ
के बकवास देख्नुहुन्छ,
तिम्रो नाम लेख्न मन लाग्छ
आफ्नो नाम संग कागज भर्नुहोस्,
तिम्रो नामले हावा भर्नुहोस्;
छोराछोरीलाई आफ्नो नाम बताउनुहोस्,
मेरो मृत बुबालाई लेख्नुहोस्
र उसलाई भन्नुहोस् कि तिम्रो नाम यस्तै छ।
मलाई विश्वास छ कि जब म यो भन्छु, तपाईले मलाई सुन्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ यो राम्रो भाग्य हो।
म धेरै खुसी भएर सडकमा हिड्छु
र म तिम्रो नाम बाहेक केहि बोक्दैन।
म सानै उमेरमा जन्मिएँ ।
मैले तीन वर्षको उमेरमा निरक्षर हुन छोडेँ,
कुमारी, अठार वर्षमा,
शहीद, पचास मा।
मैले साइकल चलाउन सिके,
जब तिनीहरू मसम्म पुगेनन्
चुम्बन गर्न, जब तिनीहरू म सम्म पुगेनन्
मुख देखि स्तन।
चाँडै म परिपक्वतामा पुगें।
पवित्र इतिहास र घोषणा।]
न बीजगणित न त बहिनी मारिपिली मलाई उपयुक्त थियो।
तिनीहरूले मलाई निकाले।
म पेसेटा बिना जन्मेँ। अब,
पचास वर्ष काम गरेपछि
मसँग दुई छ।
म यहाँ छु,
ऊ रातो टाउको थियो,
र यो उनको सूट थियो
सुन्दर पिसाब को।
कि सूर्य पहिले नै त्यहाँ छ
ओल संग उठ,
"स्कूल" मा तिम्रो पर्खाइमा।
सहरलाई घडी चाहिँदैन
कुकुर अलार्मको लायक छ।
घाँसमा रूखहरू मसँग कुरा गर्छन्
मौन को ईश्वरीय कविता को।
रातले मलाई मुस्कान बिना छक्क पार्छ,
मेरो आत्मामा यादहरु हलचल।
प्रतिक्षा गर्दै! नजाउ!
कसको पक्ष हो ? कसले भन्यो यस्तो ?
जसको पर्खाइमा थिएँ तिमिले मलाई छोडेर गयौ
मेरो कपालको सुनौलो पखेटामा
नजाउ! मेरा फूलहरू उज्यालो पार्नुहोस्!
र मलाई थाहा छ, तिमी, हावा मित्र दूत;
उसलाई जवाफ दिनुहोस् कि तपाईंले मलाई देख्नुभयो,
आफ्नो औंलाहरु बीच सामान्य पुस्तक संग।
तिमी जाँदा ताराहरू उज्यालो,
तिनीहरूले उज्यालो लिएका छन्, र म मुश्किलले देख्छु,
र मलाई थाहा छ, हावा, मेरो आत्माको बिरामी;
र यो "मिति" उहाँलाई द्रुत उडानमा लैजानुहोस्।
... र हावाले मलाई मीठो माया गर्छ,
र मेरो चाहनालाई असंवेदनशील छोड्छ ...
स्रोत: Gloria Fuertes फेसबुक
अनुमान गर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् ...
अनुमान गर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस्:
ऊ गधामा सवार छ
ऊ छोटो, मोटो र पेट भएको छ,
एक सज्जन को साथी
ढाल र भालाको,
भनाइ जान्दछ, स्मार्ट छ।
उहाँ को हुनुहुन्छ? (सान्चो पान्जा)
कि तपाईं पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, हाम्रा पिता,
कि म तिमीलाई पाइनको कुनामा महसुस गर्छु,
मजदुरको नीलो धड़मा,
घुमाउरो कढ़ाई गर्ने केटीमा
पछाडि, औंला मा थ्रेड मिश्रण।
पृथ्वीमा कला गर्ने हाम्रा पिता,
डाक्टरको घरमा ।
जहाँ तिम्रो महिमा र तिम्रो नर्क छ
र तपाईंको लिम्बो; तपाईं क्याफेहरूमा हुनुहुन्छ
जहाँ धनीहरूले सोडा पिउने गर्छन्।
प्राडो पढ्ने बेन्चमा।
हिड्दा चराहरूलाई रोटीको टुक्रा दिने बुढो मान्छे तिमी हौ।
सिकाडा मा, चुम्बन मा,
जो असल छन् सबैको।
जहाँसुकै बस्ने बुबा,
जुनसुकै प्वालमा प्रवेश गर्ने भगवान,
पृथ्वीमा भएका पीडाहरू हटाउने तपाईं,
हाम्रा पिता हामी तपाईंलाई देख्छौं
जुन हामीले पछि देख्नु पर्छ,
जहाँ भएपनि आकाशमा ।
तिमी कहाँ जाँदैछौ, सिकर्मी? (CAROL)
- तपाईं सिकर्मी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ
- म दाउरा लिन पहाडमा जान्छु
दुई टेबल को लागी।
यो शीत संग?
- म दाउरा लिन पहाडहरूमा जान्छु,
मेरो बुबा पर्खिरहनु भएको छ।
- माया लिएर कता जादै छौ
- म सबैलाई बचाउनेछु
जसले मलाई माया गर्दैनन्।
बिहान यति बिहान?
- म युद्धमा जाँदैछु
मा अग्लो छु;
मेरो तौल चालीस किलो थियो।
म क्षयरोगको छेउमा छु
समुद्र तटको किनारमा,
र, बिस्तारै, यसले मलाई निन्द्रा दियो,
र म यहाँ किनारमा सुतिरहेको छु,
प्रत्येक मौरी आफ्नो साझेदार संग।
प्रत्येक बतख आफ्नो पन्जा संग।
प्रत्येकको आफ्नै विषयवस्तु।
प्रत्येक भोल्युम यसको आवरण संग।
प्रत्येक मानिस आफ्नो प्रकार संग।
प्रत्येक आफ्नो बाँसुरी संग सीटी।
प्रत्येक फोकस यसको छाप संग।
प्रत्येक प्लेट यसको कप संग।
प्रत्येक नदी यसको मुहान संग।
प्रत्येक बिरालो आफ्नो बिरालो संग।
प्रत्येक वर्षा आफ्नो बादल संग।
प्रत्येक बादल आफ्नो पानी संग।
प्रत्येक केटा आफ्नो केटी संग।
प्रत्येक अनानास यसको अनानास संग।
हरेक रात आफ्नो प्रभात संग।
ऊँटले काटेको थियो
सडक थिस्टल संग
र मेकानिक मेल्चोर
उसलाई रक्सी दिए।
इन्धन भर्न गए
पाँचौं पाइन परे ...
र महान मेल्चियोर असहज थिए
उसले आफ्नो "लोगिनस" लाई सल्लाह लियो।
-हामी आइपुगेका छैनौं,
र पवित्र प्रसव आएको छ!
- बाह्र बजेको तीन मिनेट
र तीन राजाहरू हराए।
जीवित भन्दा आधा मृत
यसको आलिशान रिसाउँछ
जैतुनको रूखका काँधहरू बीचमा।
मेल्चियरले आफ्नो कानमा कानाफूसी गरे:
- राम्रो ऊँट बिरिया
कि पूर्वमा तिनीहरूले तिमीलाई बेचेका छन्।
आहा कति ठूलो दु:ख
उसको बेल्फो र उसको प्रकारमा!
मुर्र खसेको थियो
बालटासरले छाती बोक्छ,
मेल्चियरले बगलाई धकेल्दै थियो।
र बिहान पहिले नै
- चराहरू पहिले नै गाउँदै थिए -
तीन राजा बसे
दुरी र अनिश्चित,
मान्छे जस्तै कुरा सुन्छ
-मलाई सुन वा धूप चाहिदैन
न त ती खजानाहरू यति चिसो छन्,
मलाई ऊँट मन पर्छ, म उसलाई माया गर्छु।
म उसलाई माया गर्छु, बच्चाले दोहोर्यायो।
तीनै राजाहरू पैदल हिडेर फर्के
पतित र पीडित।
जब ऊँट पल्टियो
बच्चालाई गुदगुदी गर्छ।
मेरो गोलो अनुहारमा
मेरो आँखा र नाक छ
र सानो मुख पनि
कुरा गर्न र हाँस्न।
आँखाले सबै देख्छु
मेरो नाकले म अचिस बनाउँछु,
मेरो मुखले कसरी
बिचरा गधा !
गधा कहिल्यै गधा हुन छोड्दैन।
किनकी गधा कहिल्यै स्कुल जादैन ।
गधा कहिल्यै घोडा बन्दैन।
गधाले कहिल्यै दौड जित्ने छैन।
गधा हुनुमा गधाको के दोष ?
गधाको सहरमा विद्यालय छैन ।
गधाले आफ्नो जीवन काममा बिताउँछ,
पीडा वा महिमा बिना,
फेरीस ह्वीलमा बाँधिएको।
गधाले पढ्न सक्दैन,
तर यसमा मेमोरी छ।
गधा अन्तिम रेखामा पुग्छ,
तर कविहरूले उहाँलाई गाउँछन्!
गधा क्यानभास झुपडीमा सुत्छ।
गधालाई गधा नभन्नु,
उसलाई "मानिसको सहयोगी" भन्नुहोस्
वा उसलाई व्यक्ति कल गर्नुहोस्
के तपाईलाई ग्लोरिया फ्युर्टेस द्वारा सम्झन लायक थप कविताहरू थाहा छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » ग्लोरिया Fuertes: कविता